Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) - Hello Sayarwon
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ )
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ကဘာလဲ။
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာသည် ရောဂါဆိုးနိုင်ချေနှင့် အသက်အန္တရာယ်မြင့်သော လိင်တံကင်ဆာဖြစ်ပြီး ဖွံဖြိုးမှုနောက်ကျသော တိုင်းပြည်များတွင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ အမျိုးသားများ၌ အဖြစ်များ၏။
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာသည် လိင်တံအရေးပြားထိပ် ကြပ်ခြင်း (Phimosis) အား မကုသပဲထားခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ကြီးမှ ထိပ်ဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်သူများ (၃၈-၂၀ ကြား)တွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ထိပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လိင်တံမှထိပ်ဖျားအရေပြားအား ဖယ်ရှာပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိပ်ဖြတ်ခြင်းအခမ်းအနား (brit milah) သည် ဂျူးဘာသာ၏ ရှေးကျသော အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မွေးကင်စ ကင်းပွန်းတပ်ခြင်းနှင့် တွဲလုပ်လေ့ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အစ္စရေးလူမျိုးများတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု အနည်းဆုံး (ဝ.၁/၁၀၀,၀၀၀) ဖြစ်သည်။
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာအား အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲ၏။ စကွေးမတ်ဆဲလ်ကင်ဆာ (SCC) သည် အဖြစ်များဆုံးသော ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်များ၏ ၉၅%ထိ ရှိ၏။
စကွေးမတ်ဆဲလ်မှ မဟုတ်ပဲ ကင်ဆာဖြစ်စေသော တခြားအရာများတွင် မလနိုးမား၊ အခြေခံဆဲလ်ကင်ဆာ၊ ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာနှင့် ဆာကိုးမားတို့ ဖြစ်သည်။
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များသော်လည်း ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာလေ့လာမှုများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ကောင်းမွန်စွာ မလုပ်ရသေးပါ။ လူမျိုးမရွေး ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့် တခြားသော စက်မှုနိုင်ငံများတွင် ရှားပါးပြီး အာဖရိက၊ အာရှနှင့် တောင်အမေရိကများတွင် ၁၉၉၉ မတိုင်းမီကာလက ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းသည် အမျိုးသားဦးရေ၏ ၁၀ -၂၀ % ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Phimosis လူနာများတွင် အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ –
လိင်ချေးဖတ်များ (ကလေးရက်သားအရွယ်၌ လိင်အရေပြားထိပ်အတွင်းတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်)
စမ်းရနိုင်သော ဒဏ်ရာ (နာသော သို့မဟုတ် မနာပဲ မအီမသာဖြစ်စေသော အလုံး လိင်အရေပြားတွင် ပေါ်ခြင်း)
အသက်ကြီးသောလူနာများတွင် ဆရာဝန်ကိုမပြရာမှ အကျိတ်သည် အတွင်းထိပျံ့နှံ့သွားပြီး အနာပုံစံ သို့မဟုတ် လုံးဝန်းသော အသားပိုနှင့်တူသည့် အကျိတ် (ခေါင်းလောင်းပုံနှင့်တူသည်) ပုံစံ ခံစားရနိုင်သည်။
သင့်လျော်စွာ မကုသပါက (ဆိုလိုသည်မှ ပဋိဇီဝဆေးများ မပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထိပ်ဖြတ်ရန် မညွှန်ခြင်း)သည် အန္တရာယ်ရှိသည်များ ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကင်ဆာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက် သင့်တော်စွာ မကိုင်တွယ်ပါက အနာပဆုပ် သို့မဟုတ် ဒေါင့်တန်းရောဂါ (လိင်ခေါင်းပိုင်းရောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသားပုပ်သောအနာ)များ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများကို စိတ်မချရသော လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသူများတွင်လည်း တွေ့ရ၏။
ကင်ဆာပျံ့ခြင်းသည် မြန်ဆန်ကြောင်း မှတ်တမ်းများရှိသည်။
Phimosis မရှိသောလူနာများတွင် Phimosis ရှိသကဲ့သို့ လက္ခဏာများခံစားရသည့်အပြင် သွေးထွက်ခြင်းအား မနက်ခင်းနိုးခါစ လိင်အင်္ဂါမတ်ချိန် သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
ဆီးလိင်ပြွန်ကင်ဆာမှ ပျံ့လာသောကင်ဆာမျိုးသည် အမျိုးသားများတွင် ရှား၏။ ကင်ဆာစပေါ်ခြင်းနှင့် ပျံ့ခြင်းသည် ဆီးလိင်ပြွန်တစ်လျှောက် ဖြစ်ချင်သည့်နေရာမှ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးစိမ့်ထွက်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပရောဖက်ဆာများမှ ထပ်ရှာနိုင်မည့် တခြားသော လက္ခဏာများမှာ-
ပိုးကူးစက်ခံထားရသော အသားပုပ်သည့် ဖိုလိင်တံအနာ
စမ်းသပ်လျှင်တွေ့ရှိရမည်များ (ဥပမာ အသည်းကြီးခြင်း) သို့မဟုတ် လက္ခဏာများ (ဥပမာ ကင်ဆာကြောင့် ချုံးချုံးကျသွားခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း) စသည်တို့သည် ရောဂါပျံ့နေကြောင်း သို့မဟုတ် သွေးတွင်းကဲလ်စီယမ် များနေခြင်းတို့လို ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် တွဲဖြစ်နေကြောင်းကို ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။
မလိုလားအပ်ပဲ ရောဂါအမည်တပ်နောက်ကျသည်မျိုး မဖြစ်စေရန် လူနာများအားလုံး မှန်မှန်ပြန်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်၌ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များထဲမှ ဖိုအင်္ဂါနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်သည်များ တစ်ခုခုရှိခဲ့လျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ်သင့်သည်။
ထိပ်မဖြတ်ရသေးပဲ Phimosis ရှိနေလျှင်
လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုန့်ပြန်မှုသည် မတူနိုင်ပါ။
သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းသည် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်ပါအချက်တို့သည် ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိ၏။
Phimosis – ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာကို စောလျင်စွာ ထိပ်ဖြတ်ထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်မှုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (မွေးကင်းစ ကင်းပွန်းတပ်) လိင်အင်္ဂါသန့်ရှင်းရေးသည် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ Phimosis လူနာများတွင် လိင်အရေပြားအတွင်းပိုင်းသို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ခက်ခဲတတ်၏။
ထို့ကြောင့် လိင်ချေးဖတ်များဖြစ်လာပြီး ကုသရေးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများတွင် ၎င်းသည် ကင်ဆာပွားရန်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသောအချက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Lichen sclerosis (Balanitis xerotica obliterans ဟုလဲခေါ်သည်)
Bowen’s disease (Queyrat), Leukoplakia, Paget disease, Buschke-Lowenstein disease စသည်တို့လို ကင်ဆာကနဦးရောဂါများ
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော သို့မစဟုတ် ဖြစ်ရန်အစတည်သော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော – ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာကို အသက် ၄၀ အောက်များတွင် တွေ့ရပြီး ဖြစ်နှုန်းသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့် တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသော်လည်း ရောဂါအမည်တပ်နိုင်သော အရွယ်သည် ၆၀ တွင်ဖြစ်၏။
အသက် ၅၀ အောက် အမျိုးသားများတွင် ဖြစ်ပွားနှုန်းသည် ၁၀၀,၀၀၀ တွင် တစ်ယောက်နှုန်းဖြစ်သည်။ အသက် ၈၀ တွင်တော့ ၉ ဆ ပိုများသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ပွားနှုန်းသည် လူမျိုးပေါ်လိုက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၁၉၉၉ မတိုင်မီက အာရှလူမျိုးများတွင် ကမ္ဘာတစ်လွှား အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားနှုန်းရှိ၏။
၁၉၉၈ နှင့် ၂၀၀၃ ကြားတွင် လေ့လာမှုများအရ လူဖြူများနှင့်ယှဉ်လျှင် အာရှ/ပစိဖိတ်ကျွန်းလူသားများတွင် ၅၅%နှုန်း ထိ ဖြစ်နှုန်းကျဆင်းသွားပါသည်။
မြို့ပြတည်ခြင်းပြဿနာ – စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာသည် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု မရရှိနိုင်သောလူထုတွင် အဖြစ်များ၏။ HIV/HPV အဖြစ်များသော ဧရိယာများတွင် ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုများကြောင်းလဲ သက်သေပြထားပါသည်။
သို့သော် ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း၏ အောက်ခံအကြောင်းရင်းအား သေချာမသိရပါ။ အန္တရာယ်မကင်းသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံဖက် များခြင်းတို့တွင် ထိုဗိုင်းရပ်စ်များ ရှိနေသောသူမှ လူအများကို ပျံ့နိုင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများအား မကုသခြင်း သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်စွာ မကုသခြင်း
တခြားအချက်များ – ဆေးရွက်ကြီး သုံးခြင်း (ဆိုလိုသည်မှ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ကွမ်းစားခြင်း)၊ Phototchemotherapy (ခရမ်းလွန် အေရောင်ခြည်၊Psoralen)၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပူးပူးကပ်ကပ်နေခြင်း။
ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာနှင့် လိင်စိတ်ခံယူမှုကြား ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့စဉ်တွေ့ရသော ဖိုအင်္ဂါအနာမှ အသားစယူကာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တခြားသော ရောဂါများကို စစ်ဆေးပိုင်းခြားနိုင်သည့် ရောင်ရမ်းခြင်းတွင် သွေးဖြူဥပမာဏစစ်ခြင်း၊ အသည်းကြီးခြင်း သို့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများကို သိနိုင်ရန် ရိုးရိုးဓါတ်မှန်နှင့် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် စသည်တို့ကို အခြေခံကာ ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
Penile Cancer (ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အကျိတ်ဖုများပျံ့ခြင်း(TNM) အဆင့်ခွဲစနစ်၊ ကနဦးတွက်ချက်မှုအမျိုးမျိုး၊ အဆင့်ခွဲခြင်းတို့ကိုသုံးကာ ကုသမှုကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအားဖြင့် ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာကုသများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်း (ထိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖိုလိင်တံအား တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း အကုန်သော်လည်းကောင်း ဖြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ပေါင်ခြံမှ ပြန်ရည်ကျိတ်များနှင့် တင်ပဆုံပြန်ရည်ကျိတ်များ ဖြတ်ထုတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။)
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာ ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာ ရောဂါများကို သင့်တော်စွာ ပျောက်ကင်းသည်အထိ ကုသရပါမည်။
လိင်အင်္ဂါကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ – တော်ရုံဂရုစိုက်မှုမျိုး သို့ သန့်ရှင်းမှုမျိုးလုပ်ရုံနှင့် ကင်ဆာပွားခြင်းအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထေက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ဖိုအင်္ဂါကင်ဆာအတွက် ကာကွယ်မှုသည် အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
Hanoi medial school MD, PhD/Dr. Doan Huu Nghi| Presentations of Oncology 1998-2004. Accessed Oct 21 2016.
Medical program contents Carcinoma of the penis contributed by Dr. Donald F Lynch. Accessed by Oct 21 2016.
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, လိင်ပညာပေး
ရေပူချိုးခြင်းက ယောက်ျားတွေမှာ မျိုးမအောင်ခြင်းကို ဘာကြောင့် ဖြစ်စေသလဲ